मजाक हैन, पोखरामा साँच्चिकै रेडलाइट एरिया तोकिन्छः मुख्यमन्त्री गुरुङ [भिडियो संवाद], Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मुख्यमन्त्री गण्डकी प्रदेश l
मैले वेश्वृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न एउटा कानुन निर्माण गरौँ भन्दा चाँहि के नराम्रो भो । कतिले मलाई यो मुख्यमन्त्रीले त समाजमा विखण्डन ल्याउने कुरा गर्यो पनि भने । मेरो मान्यता छ कि यो सबै ढोङ्गी कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्छ नत्र हाम्रो समाजमा देखिएको व्यभिचारलाई अन्त्य गर्न सक्दैनौ । मैले के मात्र भनेको हो भने यो विषयमा अब छलफल गरौँ, बहस गरौँ । यस विषयमा निर्णय गरेको पनि होइन। पोखरामा र नेपालभरि नै यो वेश्यावृत्ति जुन ढङ्गले भइरहेको छ र यसले समाजमा जुन प्रकारको विकृति ल्याइरहेको छ, त्यसको अन्त्य गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा मैले गरेको हो । त्यसका लागि रेड लाइट एरिया तोक्नु उचित हुन्छ ।
रेडलाइट एरिया खोल्दा ठिक कि बेठिक भनेर छलफल चलाउने बेला भयो भनेको हो मैले। जसरी यौन व्यवसाय चलिरहेको छ र यौनकर्मीहरु छन्, उनीहरुले पनि सास्ती खेपिरहेका छन्। उनीहरुको कमाइको आधा त प्रशासन र सुरक्षा निकायका मानिसहरुले खान्छन् होला। च्याप्प समायो लग्यो। रङ्गेहात समात्यौं भन्यो पैसा खायो । होटलवालाको पनि बेइज्जती, त्यहाँ काम गर्नेको पनि बेइज्जती, पक्राउ पर्ने पुरुषको पनि बेइज्जती, महिलाको पनि बेइज्जती। त्यस्तै पर्यो भने अर्काकी श्रीमती परिरहेकी हुन्छिन्। त्यसपछि घर परिवार सबै विखण्डन हुने भयो। अनि जत्ति भन्यो त्यत्ति पैसा दिएर उनीहरु निस्किन्छन्। यो अहिले दैनिकजसो भइरहेकै कुरा हो ।
यो विषय अरुले भन्न सकेका थिएनन् मैले कुरा खोलिदिएको हो। मैले विषय सार्वजनिक रुपमा बोलिसकेपछि अनलाइनहरुमा खबर आयो। करिब ७० प्रतिशतले यो एकदम राम्रो विचार हो, अब यसैगरी जानुपर्छ भन्ने मत राखेका छन्। अर्को थरीले अब मुख्यमन्त्रीको काम रहेनछ, अब वेश्यालय खोल्ने, आनन्दले बस्ने होला भनेर पनि कमेन्ट आइरहको छ। यस्ता मानिस त समाजमा भइहाल्छन्। त्यसकारण अहिलेको जमानामा यदि समाजलाई सभ्य बनाउने हो रेडलाइट चाहिन्छ । भने यो चीज अरुले भन्न सकेनन् मैले मात्रै भनेको हो। यहाँका व्यवसायीहरुपनि यो विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ। यसलाई व्यवस्थित गरौं भन्ने उहाँहरुको पनि सुझाव छ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि सम्मेलनमा कोपनहेगन हामी एक हप्ताको कार्यक्रमकालागि गएका थियौं। एक दिन हामीलाई फुर्सद भयो। साथीहरुले यहाँ हिप्पीहरुको गाउँ छ भन्ने सुनाए। अनि हामी हिप्पी गाउँमा गयौं। त्यहाँ जाँदा त दिउँसै गाँजा खाएर राता राता आँखा पारेर सडक सडकमा बसिरहेका मानिसहरु देखिए । रेस्टुरेन्टमा पस्यो भने पनि त्यस्तै मात्र मान्छे छन्। सबै राता राता आँखाले हामीलाकई हेरिरहेका छन्। त्यो सिमानाभित्र उनीहरुको छुट्टै राज छ। उनीहरुले समाजमा कसैलाई केही बिगारेकै छैनन्। नियन्त्रित र व्यवस्थित छ त्यो। तर सबै सभ्य समाज बसेको ठाउँमा दुई जना हिप्पी बसेर गाँजा खाइदियो भने के हुन्छ समाजमा ? त्यही भएर त्यसलाई निश्चित ठाउँमा लगेर थन्क्याइयो। मैले पनि त्यही भनेको हो। त्यो हिप्पीको गाउँले गर्दा डेनमार्क सबै भन्दा गन्हाएको ठाउँ भएको छ की संसारको विकसित र सभ्य मुलुक छ डेनमार्क, नर्वे स्वीडेनहरु?
आजको जुवा त नियम कानुनले बाँधेको हुन्छ। व्यवस्थित गरेको हुन्छ। एकथरी मानिसले प्रयाप्त सम्पत्ति कमाएको हुन्छ। उनीहरुलाई त्यो पैसा कहाँ खर्च गरौं भन्ने भइरहेको हुन्छ। कसरी मनोरञ्जन गरौं भन्ने हुन्छ। त्यस्ता करोडपछि, अबरपति र खर्बपतिलाई पोखराजस्तो ठाउँमा रमाइलो डाँडामा क्यासिनो खोल्यो भने हामीले त पैसा पो कमाउन सक्छौं त। एउटा अमेरिकाको अबरपतिलाई क्यासिनो खेलेर यहाँ उसलाई राख्दा हाम्रो समाजलाई के नोक्सानी हुन्छ? हामीले त त्यो क्यासिनोबाट रोजगारी पाएका हुन्छौं, त्यहाँबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका हुन्छौं। त्यो क्यासिनाले नेपाल सरकालाई रोयल्टी तिरेको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति यहाँ आएपछि त्यसले तास मात्रै खेल्दैन होला, खान्छ होला, पिउँछ होला, सुत्छ होला। त्यसबापत हामीले फाइदा लिन्छौं। यसलाई व्यवस्थित गरेर हाम्रो समृद्धितिर जोड्नुपर्छ। क्यासिनोमा नेपाललाई जान नदिने हो। अनि विदेशको पैसा यहाँ ल्याउने कुरा, विदेशीको कहाँ फालौं कहाँ फालौं भन्ने पैसा नियम संगत ढंगले लिँदा बुद्धिमानी हुन्छ की पाँच पाण्डवको वनबास भयो यसलाई बन्द गरौं भनेर बस्ने ?
[टेकनारायण भट्टराई र मदन कोइरालासँगको संवाद]
मुख्यमन्त्री गुरुङसँग रेडलाइट एरिया तोक्ने तयारीबारे यो रोचक भिडियो संवाद हेर्नुहोस्ः